Xaalada Degmada Afmadow - Warbixinta Keydmedia | KEYDMEDIA ONLINE
Xaalada Degmada Afmadow - Warbixinta Keydmedia
Kismaayo - (Keydmedia) Xaaladda degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose oo xalay ku hoyatay gacanta Ciidamada dowladda KMG ah ee Soomaaliya, Raaskaambooni iyo Kenya ayaa maanta deggan, ayadoona warar la helaya ay sheegayaan in Ciidamada huwanta ah ay xalay oo dhan ilaa saaka ay howlgallo ka wadeen gudaha magaalada.
Ciidamada huwanta ee isugu jira kuwa Dawladda KMG ah, kuwa Dhaq dhaqaaqa Raaskaambooni iyo kuwa Kenya ayaa si rasmi ah shalay abaaro 1:30 ula wareegay gacan ku haynta degmada Afmadow oo ay muddo sanado ah maamulaayeen Maleeshiyaadka kooxda Shabaabka , waxaana ay ciidamada fariisimo ka samaysteen xarunta degmada Saldhigga Booliska iyo goobo kale oo degmada kamid ah.
Howlgallo ballaaran oo ay Ciidamada ka sameeyeen gudaha magaalada Afmadow waxaa ay ku soo qab qabteen tiro dhalinyara ah kuwaasoo la sheegay inay ka tirsanaayeen Maamulkii awoodiisa la wiiqay ee Shabaabka. Saraakiisha Ciidamada dowladda ee ku suggan Afmadow waxaa ay sheegeen inay cafis u fidinayaan cidii ka tirsanaan jirtay kooxda Shabaabka ee isku soo dhiibta.
Taliyaha Ciidamada Dawladda Col. C/laahi Saxardiid ayaa balan qaaday in dagaalku socon doono ilaa ay guud ahaanba gobolka Jubbada Hoose ka saaraan Al shabaab. Ciidamada huwanta ah ayaa shalay galab waxaa ay magaalada Afmadow uga baxeen ilaa labo waddo kuwaasoo kala ah mida aada magaalada Kismaayo iyo mida aada magaalada Bu'aale.
Qaybta koowaad ee Ciidamada oo wata gaadiidka kala duwan ee dagaalka ayaa u baxay dhanka waddada aada magaalada Kismaayo, qaybta kale oo iyagana aad u qalabaysan ayaa u baxay dhanka degmada Bu’aale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe.
Waxaa xusid mudan in dagaalyahanii Al shabaab ee shalay ka baxay degmada Afmadow ay kala qaadeen labadaasi waddo oo ay kala aadeen magaalooyinka Kismaayo iyo Bu’aale.
Saraakiil katirsan Ciidamada Dawladda ayaa si hoose noogu sheegay in ay culayska saari doonaan sidii ay u qabsan lahaayeen degmada Jilib ee gobolka Jubabda Dhexe taasi oo macanaheedu yahay in ay go’doon yihiin shabaabku kusugan Kismaayo, Jilb degmada Afmadow waxay u jirtaa 110km.
Si kastaba qabsahada degmada Afmadow waxay shabaab ku tahay mid kamid ah jababkii ugu xooganaa ee soo gaara, iyadoo ay dad badan shaki gelinaayaan sii haysashada Al shabaab ee magaalada Kismaayo.